ओलीको कदममा देउवाको पूर्ण साथ, ओली बिरुद केन्द्रीय सदस्यलाई बोल्न छेकबार ! – Enepali Samchar
ओलीको कदममा देउवाको पूर्ण साथ, ओली बिरुद केन्द्रीय सदस्यलाई बोल्न छेकबार !
December 26, 2020 adminLeaveaComment on ओलीको कदममा देउवाको पूर्ण साथ, ओली बिरुद केन्द्रीय सदस्यलाई बोल्न छेकबार !
e nepalisamchaar / नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन नहुने पक्षमा देखिएको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ । उनले केन्द्रीय कार्यसमितिको जारी बैठकमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा बोल्ने सदस्यलाई समेत ‘अदालतमा प्रवेश गरेको विषय’ भन्दै नबोल्न भनेको समाचारमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्ने तर पुनःस्थापनाको माग उठाउन नहुने देउवाको भनाइ छ । देउवा पुनःस्थापनाको विरोधमा देखिएपछि शुक्रबारको बैठकमा पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आपत्ति जनाएको बताइएको छ ।
राजधानी दैनिकले पनि देउवाले कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको कुनै एजेन्डा नबोक्ने बैठकमा स्पष्ट पारेको खबर छापिएको छ । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतका नेताले संसद् पुनस्थापनाको एजेन्डालाई जनतासमक्ष लिएर जानुपर्ने माग गरिरहेको अवस्थामा सभापति देउवाले त्यस्तो एजेन्डा बोक्न नसकिने स्पष्ट पारेका हुन् ।
त्यस्तै रमेश लेखकले संसद् पुनस्र्थापनाको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसबारे धेरै छलफल र आन्दोलन गर्न नहुने बताए । पौडेलले संविधान मिचिएको र लोकतन्त्र मासिएको विषयमा बोल्न मिल्दैन भन्नु गलत भएको बताए । यस्तै कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लोकतन्त्र कसैले मास्न नसक्ने भएकाले यसमा कुनै चिन्ता गर्न नहुने बताए ।
बागमतीमा नयाँ सरकार बन्न कांग्रेसको समर्थन अनिवार्य, यस्तो छ नया समीकरण
यस्तो छ पूजाको समयमा घण्टीको प्रयोगको धार्मिक मान्यता
प्रचण्ड र माधवको सपना चकनाचुर, ओलीको कदम स्वागतयोग्य
डलरको मूल्य स्थिर, कति छ अन्य मुद्राको मूल्य ?
आउँदो बैशाख ६ गतेदेखि हकप्रद सेयर निष्कासन हुँदै, कुन कुन कम्पनीको र कति ?(पूरा विवरण )